မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လူမူကွန်ယက် website များတွင် ကြေငြာမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိအရေးပါနေပြီလည်း | Myanmar Tech Press
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လူမူကွန်ယက် website များတွင် ကြေငြာမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိအရေးပါနေပြီလည်း
2017-12-27 2018-04-06 Admin Ecommerce, Internet, Marketing, နည်းပညာ, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု
Image Source: http://aplus.com
ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး လူမှုကွန်ယက် ဆိုတဲ့ အရာကြီးကို အရင်တုန်းက အကျွမ်းတဝင်မသိခဲ့ကြလျှင်တောင် ယနေ့ခေတ်မှာ လူမှုကွန်ယက်ဆိုတဲ့ အရာကြီးကို တော်တော်လေး နားလည် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လူမှုကွန်ယက် website တွေရဲ့ ရေးပါပုံ အသုံးပြုကြပုံ အသုံးပြုကြနှုန်းတွေကို တိတိကျကျ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သိတဲ့သူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်တော်လေး မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။ ဥပမာ facebook ဟာ သောကြာနေ့ညဘက်ပိုင်းမှာ လူသုံးပိုများတာမျိုး နောက်ပြီး twitter မှာ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံဟာ ၆ မျိုးရှိတာမျိုးအစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက် Website တွေကိုအဓိကအနေနဲ့ ဘယ်မှာအသုံချကြမလဲ
လူမှုကွန်ယက်အကြောင်းမပြောခင် ကျွန်တော်တို့ ကြော်ငြာခြင်း အကြောင်းကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ကြော်ငြာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ Company ရဲ့ ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုတွေဟာ Customer တွေအတွက်ဘယ်လောက်အသုံးဝင်ကြောင်း စိတ်ဝင်စားလာအောင် ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။ ကြောငြာအားကောင်းလေ လူစိတ်ဝင်စားလေဖြစ်ပြီး Company လည်းပိုမို တိုးတက်လာပြီး ၀င်ငွေလည်းကောင်းလာမှာပါ။
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပြောရမှာက ထိုကြော်ငြာတွေအတွက် လူမှုကွန်ယက် website တွေရဲ့အရေးပါပုံပါ။ လူမှုကွန်ယက် website တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ Company ရဲ့ပစ္စည်းအရည်အသွေး သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိကောင်းကြောင်း အသုံးပြုသူ Customer တွေဆီသို့ အမြန်ဆန်ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ချိတ်ဆက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပါ။
ဘယ်လိုမျိုးလူမှုကွန်ယက် Website တွေကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေကြသလဲ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ လူမှုကွန်ယက်ကနေကြော်ငြာလို့ရတဲ့ website တွေဟာ ရေတွက်လို့မရလောက်အောင်ကို များပြားလွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ပါ
website တွေကတော့ လူတော်တော်များများသုံးကြပြီး ကြော်ငြာတွေပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင်လည်း ထိရောက်မှုအားကောင်းတဲ့ Webiste တွေပါ။
Image Source: https://macaunews.mo
ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ ကွန်တော်တို့တော်တော်များများသုံးကြတဲ့ Facebook website ပါ။ သူကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးလူမှုကွန်ယက် website တစ်ခုပါ။ သင်ဟာ company စထောင်လျှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပစ္စည်းသစ်တစ်ခု စထုတ်လိုက်လျှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆုံးစကြော်ငြာသင့်တာကတော့ facebook website ပေါ်မှာပါပဲ။
Image Source: https://www.nugit.co/twitter
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ twitter ပါ။ twitter website ကတော့ facebook ပြီးလျှင် လူသုံးအများဆုံး website စာရင်းထဲမှာရှိပါတယ်။ သို့သော် သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ twitter မှာကြော်ငြာမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာ facebook မှာ ကြော်ငြာပြုလုပ်ခြင်းထက်ပိုပြီး ထိရောက်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ လူသုံးပိုများလို့မဟုတ်ဘဲ twitter မှာတက်လာတဲ့ကြော်ငြာဆိုလျှင် အသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ ဂရုတစိုက် ပိုဖတ်ကြလေ့ရှိလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ facebook မှာကြော်ငြာခြင်းကပဲပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ twitter သုံးတဲ့သူဟာအတော်လေးရှားပါးလို့ပါ။
Image Source: https://www.hipwee.com
နောက်ထပ်တစ်ခုဟာ Instagram ပါ။ ဒီ website ကတော့ facebook နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် post တွေတင်မယ်ဆိုလျှင်တော့ ပုံရယ် ၁မိနစ်စာ video တွေရယ်ပဲတင်လို့ရပါတယ်။ ဒီ website ကိုသုံးတဲ့ user တွေဟာလည်း facebook က အသုံးပြုသူတွေလို ဗရုတ်သုတ်ခတွေမပါဘဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးကြတဲံသူတွေတော်တော်များပါတယ်။ ဒီ website မှာတော့ အစားအသောက်နဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုကြော်ငြားခြင်းဟာ အခြား ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ငြာခြင်းထက်ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
Image Source: http://www.piemmesi.it
နောက်ထပ်တစ်ခုပြောပြချင်တဲ့ website ကတော့ LinkedIn ပါ။ LinkedIn ကတော့ ပစ္စည်းတွေကြော်ငြာခြင်းထက် အလုပ်အကိုင်တွေကြော်ငြာခြင်းနှင့် အခြားသော အလုပ်အကိုင်နှင့်ပက်သက်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများကြော်ငြာခြင်းများက ပိုထိရောက်မှုရှိပါသည်။ ထိို website ကိုအသုံးပြုသူများကလည်း ယခုလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောအလုပ်ထက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ လိုခြင်လို့သုံးကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။ LinkedIn မှာတော့ အလုပ်အကိုင်တဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ဘယ်လိုနေသင့်တယ် အစရှိသဖြင့် အကြံဉာဏ်မျှ ဝေခြင်းများပြုလုပ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး အလုပ်အကိုင်နဲ့ပက်သက်ပြီး အလုပ်ခေါ်တဲ post များလည်းတင်ကြပါတယ်။
Image Source: https://www.skelbiu.lt
နောက်ထပ်တစ်က google + နှင့် Youtube website ပါ။ သူတို့ကတော့ ရုပ်ရှင်တွေ ဟာသတွေ သီချင်းတွေအစရှိတဲ့ video တွေအကုန်စုနေတဲ့ domain တစ်ခုပါ။ သူ့ဆီမှာကြော်ငြာမယ်ဆိုလျှင်တော့ video ကြည့်နေစဉ်အတွင်း မိမိကြော်ငြာက ၁၅ စက္ကန့် ခဏတာကြော်ငြာဝင်လာမှာပါ။ သို့သော် ၃ စက္ကန့်နေလျှင် user က ဆက်မကြည့်ချင်လျှင် ကြော်ငြာလို့ရပါတယ်။ ဒီwebsite မှာကတော့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ကြော်ငြာလျှင် ပ်ုပြီးထိရောက်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီ website ကိုသုံးတဲ့သူတော်တော်များများက entertainment အတွက်သုံးတဲ့သူများတာကြောင့်ပါ။ သူတို့တွေဟာ သူတို့တစ်နေ့တာအတွက်အသုံးဝင်မယ့်အရာမျိုးကိုပဲ ဒီ website မှာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ကြတာများလို့ပါ။
Image Source: https://www.scoopnest.com
နောက်တစ်ခုကတော့ Snap chat ဆိုတဲ့အရာပါ။ သူကတော့ Instagram နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး သူ့ရဲ့ထူခြားချက်ကတော့ တင်သမျှ post တွေဟာ အမြဲတမ်း သိမ်းထားမှာ မဟုတ်ဘဲ ၂၄ နာရီပြည့်ပြီဆိုတာနှင့် သူ့အလိုလို ပျက်သွားမှာပါ။ ဘာမှတ်တမ်းမှကျန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူကတော့ application နဲ့ သုံးကြတာပိုများပါတယ်။
ဒီလိုလူမှုကွန်ယက် website တွေသုံးပြီးတော့ကြော်ငြာတွေကို လိုချင်တဲ့ Customer တွေဆီ ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်ကြမလဲ?
ထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းကို ကောင်းကောင်းမသိလျှင် သင်ဦးဆောင်နေသော စီးပွားရေးကို တော်တော်လေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ စနစ်ကျပြီး ထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာကောင်းတွေကို ကောင်းကောင်းမပြုလုပ်နိုင်လျှင် သင်လိုချင်သော Customer ဆီကို မရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါဆိုလျှင် သင့်ရဲ့ ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို မသွားတော့လျှင် Customer ကောင်းကောင်းရနိုင်တော့မှာာမဟုတ်ပါ။
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ စနစ်ကျတဲ့ကြော်ငြာခြင်းတွေကို ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ကြမလဲ?
အရင်ဆုံးကျွန်တော် တို့ မှာ Goal ရှိရပါမယ်။ ဒီနှစ်မှာ ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရှိရမလဲ။ ၀န်ထမ်းဦးရေဘယ်လောက်ထိတိုးတက်ရမလဲ။ အမာခံ Customer ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ အစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်လို Customer မျိုးကို အဓိကထားပြီး လုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်မှာလည်းဆိုတဲ့အချက်ကို ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ ဒါမှသာ လိုချင်တဲ့ Customer ကို သိပြီး ဘယ်လို လူမှုကွန်ယက် Website မျိုးမှာ ဘယ်လိုကြော်ငြာမလည်းဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရမှာပါ။ ဒီလိုသိပြီဆိုလျှင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာအသုံးပြုလိုတဲ့ website ကို ရွေးချယ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ စာ၊ ဗီဒီယို၊ ပိုစ့်၊ ဓါတ်ပုံ အစရှိသည်တို့ကိုအသုံးပြုပြီး လိုချင်တဲ့ Customer ဆီကို တိုက်ရိုက်ရောက်အောင် ထိထိရောက်ရောက် ကြော်ငြာနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းပါ။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ မိမိသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ Goal တွေနဲ့ ယခုလက်ရှိအခြေအနေဟာ ထပ်တူကျနေသလား ကျော်လွန်နေသလား ဒါမှမဟုတ် ကွာဟာမှုတွေရှိမေသလား။ ထပ်တူကျနေတာ သို့မဟုတ် ကျော်လွန်နေတာဆိုရင်တော့် ဒါဟာ အောင်မြင်နေတဲ့ လက္ခဏာဆိုပေမယ့် ကွာဟာမှုတွေရှိနေပြီ ဆိုလျှင်တော့ Company အတွက် လိုအပ်တဲ့ Customer တွေဟာ တိုးတက်လာမှုမရှိတာ သို့မဟုတ် ဆုတ်ယုတ်လာတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နေတာမို့လို့ ကြော်ငြာခြင်း စနစ်နဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ လူမှုကွန်ယက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကြော်ငြာတွေပြုလုပ်ခြင်းက ဘယ်လောက်ထိ သင့် Company တိုးတက်မှုကို အကျိုးပြုနေသလဲဆိုတာပါ။
လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ကြော်ငြာတွေပြုလုပ်ခြင်းက သင့် Company ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကို မသိသေးတဲ့သူတွေကို သိသွားစေပါတယ်။ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော Company သေးတွေဟာ လူမှုကွန်ယက် website တွေကနေ ကြော်ငြာခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီး Customer အသစ်တွေရအောင်ပြုလုပ်နေကြရပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသော Company သေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေ ၀န်ဆောင်မှုအသစ်တွေကို Customer တွေကို သိအောင်လုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနေကြရပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းခြင်းက သင့် Company ကိုလူတွေပိုသိလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်ပြီး ထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေက သင့် Company ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းတွေက Customer တွေဆီကို ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးရှိပြီး အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစေလည်းဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီးပြောပြနိုင်ပါတယ်။
Myat Hpone Myint
← မြန်မာခရီးသွားများအတွက် Airbnb
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအပေါ် IoT ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု →